A Procrastinator's Gwaro reKushambadzira Zororo Martech Zone
Nguva yezororo iri zviri pamutemo pano, uye iri kuumbika kuve imwe yeakakura pane ese akanyorwa. Na eMarketer kufanotaura zvekutengesa e-commerce kushandisa kune inodarika $ 142 bhiriyoni mwaka uno, pane zvakawanda zvakanaka zvekutenderera, kunyangwe kune vashoma vatengesi. Ihwo hunyengeri hwekugara uchikwikwidza kuve nehungwaru nezvekugadzirira.
Sezvineiwo unenge watotanga kuita izvi, uchishandisa mwedzi mishoma yapfuura kuronga mushandirapamwe wako uye kuvaka mazita uye mazita evateereri. Asi kune avo vachiri kudziisa mainjini avo, shingai: hakuna kunonoka kuita chinetso. Heano matanho mana ekongiri ayo achakubatsira iwe kuvaka uye kuita inobudirira yezororo zano.
Nhanho 1: Gadziridza yako Nguva
Kunyangwe 'mazororo' achinyatsoita Kutenda kuKisimusi, mwaka wezororo wekutenga hauna kunyatso tsanangurwa. Zvichienderana neya2018 yekutenga maitiro, Google inoratidza izvozvo 45% yevatengi vanotaura kuti vakatenga chipo chezororo naNovember 13, uye vazhinji vapedza kutenga kwavo zororo mukupera kwaNovember.
Nenguva yakangwara, kusvika kunonoka kumafaro hazvireve kupotsa panzira huru. Shandisa pakati paNovember kuti utarise pakumaka nekutarisira - izvi zvichakubatsira iwe kusvika kune vatengi pakutanga mukufungisisa kwavo uye chikamu chekutenga.
Sekuvonga uye neCyber ​​Svondo kusvika, tanga kuburitsa madhiri nekuwedzera kushambadzira munzira, kuunza mufaro pakati pevatengi. Wobva wawedzera yako yekutsvaga uye yekumisikidza mabhajeti pamberi peCyber ​​Muvhuro. Pakazara, kuwedzera bhajeti nekatatu kusvika kashanu mukati memwaka wezororo kuchakupa iwo mukana wakanakisa wekutora izvo zvimwe zvekushandurwa mumusika wemakwikwi.
Chekupedzisira, Q1 yakaratidza kuve mumwe wemwedzi wakasimba kwazvo wee-commerce, inotakura zororo rekuwedzera mukati megore Idzva. Chengetedza bhajeti yako yakasimba kuburikidza neinenge yaJanuary 15 kuti ushandise zvakanyanya zveiyi yekukura tsika mukutevera-zororo kunotenga.
Nhanho 2: Tungamira Kuisa paMunhu
Vazhinji vatengesi vadiki havafi vakatarisira kuenzanisa mabhajeti eshambadziro egiants senge Amazon neWalmart. Kuti ugare uchikwikwidza, musika wakangwara - kwete kuomesesa - nekukanganisa kwako kuita kwako.
Sezvo iwe paunounganidza tsika yako uye kutarisa-se-sevateereri, tarisa mukati kukosha kwehupenyu. Ndiani kubva pakati pezvinyorwa zvako akashandisa mari yakawanda newe, uye ndiani anotenga newe kazhinji? Ndivanaani vanga vari vatengi vako vachangopfuura? Izvi ndizvo zvinangwa zvakakosha zvekusimudzira nekutengesa muchinjikwa, nekutsausa imwe shambadziro, kushandisa zvinhu zvine chekuita nazvo, kupa bundling pakuderedzwa kana kupa chipo pakubhadhara.
Paunenge uchikurudzira vatengi kweupenyu hwese, usakanganwa kuteedzera uye kunanga vashanyi vatsva. Criteo inoshuma kuti vashanyi vewebhusaiti avo vanodzokororwa nemashambadziro ekuratidzira ari 70% zvimwe kutendeuka. Kurekodha chiitiko chevashanyi ichi uye kuvaka zvikamu zvakapatsanurwa mukati memwaka wezororo kwakakosha pakuvadzosa nekuchengetedza shanduko.
Nhanho 3: Craft Smart Kukwidziridzwa
Kukwidziridzwa kunoshanda zvakanyanya kana zvichikodzera izvo zvido uye zvido zvevateereri vako chaivo. Wongorora zvako zvemberi zvehoridhe maitiro uye dzidza zvinoshanda, wobva waisa mari mune izvo zvinokurudzirwa.
Hauna chokwadi kuti chii chiri kushanda zvakanyanya? eMarketer inoshuma kuti iyo zvinonyanya kufadza zvekushambadzira zvinodzikisira neinotyisa 95%. Kutakura kwemahara zvakare kunofanirwa pazvinogoneka, uye zvipo zvemahara uye mapoinzi ekuvimbika ari kufadzawo vatengi. Zvichienderana nezvako chigadzirwa uye bhajeti, iwe unogona kufunga zvakavimbiswa mazuva ekuendesa, coupon kodhi, pre-yakaputirwa zvipo seti uye tsika tsika
Nhanho 4: Tora yako Webhusaiti Traffic-Yakagadzirira
Yako webhusaiti iri kugadzirira traffic traffic? Shanduko diki diki dzinogona kuita mutsauko mukuru kana zvasvika pakugadzira kwekupedzisira kutengesa.
Kutanga nekuona kuti webhusaiti yako inotarisa mibvunzo yepamoyo uye kusahadzika kunobuda panguva yechiitiko chekutenga. Iyo yakadzika sei chipingaidzo chekupinda? Zviri nyore sei kudzoka? Ini ndinoshandisa sei chigadzirwa? Nhanho dzakareruka senge kupatsanura zvigadzirwa nemutengo, uine vatengi ongororo uye kutsanangura kurerukirwa kwekudzoka kunobatsira kuvaka kuvimba nevatengi.
Tevere, ita kuti webhusaiti yako ive nyore kufamba pane nhare. Tsvagiridzo yeGoogle inoratidza izvozvo 73% yevatengi vanozoshandura kubva kune isina kugadzirwa nhare mbozha kuenda kune imwe nhare mbozha izvo zvinoita kuti kutenga kuve nyore. Usazviisa panjodzi yekurasikirwa neshanduko idzi nekutarisisa kuvapo kwako kwenhare.
Chekupedzisira, gonesa chinonyanya kukosha chikamu chako chee-commerce chitoro: iyo Checkout. Tora nguva yekunzwisisa kuti chii chinokonzera vatengi kusiya ngoro dzavo uye kugadzirisa izvo zvinhu. Imari yekutumira here kana mimwe mitengo isingatarisirwe? Checkout yako yakaoma uye inotora nguva? Vatengi vanofanirwa kugadzira account here? Ita nyore maitiro acho zvakanyanya sezvazvinogona kuti uzvipe iwe wakanyanya mukana wekupedzisa kutengesa.
Aya anongova matanho akakosha ekutora kana uchigadzirira mwaka wezororo - asi kunyangwe hazvo uchitanga kunonoka sei, nhanho imwe neimwe yekukwirisa uye kugadzirisa hunhu ichabatsira kuita mutsauko muzasi kwako mutsetse. Kunyangwe zvirinani, iro basa rawakaisa izvozvi, kubva pakutsvaga kuenda kune saiti shanduko kukudziridzwa kwechiratidzo, iri kutokugadzirira iwe kushambadzira zvinobudirira kuburikidza neGore Idzva uye kupfuura.
Tags: cyber vhikiecommercekutenga zororooptimizationWalmart